IPhone isina sevhisi? Edza izvi mhinduro | IPhone nhau
Paul Aparicio | | Updated on 18/01/2017 15:52 | IPhone Zviteshi, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Nharembozha dzedu dzinokwanisa zvakanyanya zvekuti dzimwe nguva tinokanganwa kuti idzo nharewo. Ini pachangu, ini handiwanzo kufona zvakanyanya pafoni, saka pakutanga ini ndingadai ndisina kunetseka zvakanyanya nezvekurasikirwa nekuvhara dai zvisiri izvo zvekuti ini ndisingakwanise kubatana neinternet futi, saka Ini handizokwanise kubata chero munhu uye hapana anozokwanisa kundibata. Iyo iPhone inogona kunge iine zvimwe kuvhara matambudziko yatichataura mune ino posvo.
Ini pachangu, ini handizive panyama chero munhu akasangana nematambudziko ekuvhara pa iPhone senge iwo anokurudzira ichi chinyorwa, asi zviitiko zvisinganzwisisike zvakataurwa mune iyo iPhone inorasikirwa nechiratidzo zvichienderana nekuti imwe SIM kadhi inoshandiswa kana imwe, ichisvika yakaparadzaniswa mhedzisiro yekuti nei kutadza kuri kuitika. Zvandinoyeuka, Apple haina kubvuma zviri pamutemo kuti pane dambudziko iine iPhone yakatangwa, saka pazasi tinotsanangura zvaunogona kuita kana iwe ukawana "Hapana sevhisi" meseji pane iyo iPhone skrini
1 Zvekuita kana yako iPhone ikarasikirwa nekuvhara
1.1 Tarisa SIM chinzvimbo
1.2 Tarisa mamiriro eSIM tireyi
1.3 Gadziridza inotakura kana marongero eIOS
1.4 Fonera anoshanda uye atipe tsananguro
1.5 Ko kana tikachinja anoshanda?
Zvekuita kana yako iPhone ikarasikirwa nekuvhara
Tarisa SIM chinzvimbo
Chinhu chekutanga chatingaite kutarisa mamiriro eSIM. Sezvo isu tisiri nyanzvi uye isu tingave takakanganisa, nzira yakanakisa yekutarisa kana SIM kadhi iri mumamiriro akanaka kana kwete iri edza pane imwe iPhone. Kana iro kadhi richishanda muiyo iPhone nyowani, isu tatoziva kuti zvakanaka uye isu tinofanirwa kutsvaga iko kukanganisa kumwe kunhu.
Kana isu tichida kuona kuti kadhi rinoshanda, sezvo iyo yechipiri iPhone inogona zvakare kuve nedambudziko, futi tinogona kuzviyedza pane mamwe madivayiri, senge iPhone 6 kana chero imwe smartphone isina chekuita neApple.
Tarisa mamiriro eSIM tireyi
Iyo SIM tireyi yakakanganiswa here? Kana isu tichifunga nezvekuti tireyi inogona kunge yakaremara nechegumi che millimeter, nzira yakanakisa yekutarisa kuti tireyi iri pachokwadi shandisa pane imwe iPhone. Semuenzaniso, kana isu tichiziva mumwe munhu ane iyo iPhone iyo SIM kadhi inoshanda zvakakwana, zvakanakisa zvatingaite kuyedza tray yedu neSIM yekuzivana kwedu pane yavo iPhone. Kana ikashanda, tinogona kutonga kuti dambudziko riri muSIM tray yedu.
Gadziridza inotakura kana marongero eIOS
Izvi zvinogara zvichinyanya kukosha kuti unakirwe nehukama hwakanaka. Zvirongwa zveanoshanda zvinotsamira, sezita zvarinoreva, pane anoshanda. Kana vaita chero shanduko inogona kukanganisa yedu iPhone, iyo oparesheni ichavhura mitsva marongero ayo ichaonekwa ichiwanika kana isu batanidza iPhone yedu iTunes.
Nezvataurwa pamusoro apa, kana tikasangana nematambudziko ekuvhara pa iPhone kana chero imwe iPhone, chatichafanirwa kuita kubatanidza chishandiso chedu kuTunes, tarisa kana paine chigadziriso chiripo uye, kana chiripo, gadza iyo nyowani marongero eanoshanda. Kana iyo yekuvandudza iripo iri nyowani vhezheni yeIOS, inogara iri zano rakanaka kuti uchengetedze yako system irambe ichionekwa, saka zvakakodzera kuisa iyo yekuvandudza.
Fonera anoshanda uye atipe tsananguro
Kunyangwe ichi chiri chinhu chekutanga chatinofanira kunge takaita, ndakachiisa kanenge kumagumo nekuti isu tatoziva mashandisiro avanoishandisa, kuti ivo vanozoedza kutiita dzungu uye vanokwanisa kutigonesa kuchinja mafoni kana achishanda zvakakwana uye iye anokonzera matambudziko edu ndiye anoshanda.
Chero zvazvingaitika, ndinofunga ingave iri nyaya isinganzwisisike, anoshanda inogona kutipa mhinduro inoshanda chaizvo. Dzimwe nguva, mhinduro iyi inosanganisira shanduko yakapusa yeSIM kadhi, chimwe chinhu chinogona kushanda kunyangwe isu tisingakwanise kutsanangura kuti sei, nepo zvisingawanzoitika vanogona kusvika pakuziva kuti ndivo vane mhosva, kungave nekuda kwedambudziko chairo kana nekuti kufukidzwa kwavo hakuiti akatsiga munzvimbo yatinogara.
Ko kana tikachinja anoshanda?
Kune zvakaipa zvakakura, mishonga mikuru. Panguva ino tingadai takatoyedza zvese uye tingadai takasimbisa kuti iPhone yedu inoshanda nemushandi X. Mhinduro yacho iri nyore: kana mutengo weanoshanda X wakakodzera, iyo mhinduro inogona kunge iri yekushandisa opareta ine kufukidzwa kunoenda zvakakwana munzvimbo yatinofamba. Nei uchitambura kana mutengo wakafanana? Muchokwadi, kunyangwe ini ndisina kuchinja opareta, ndiye mushandirwi ndiye akachinja kufukidzwa, ndakatanga kuve nezvinetso zvekumhanya zvishoma, opareta akatyora chibvumirano chake nemushandi aipa kufukidzwa uye, payakachinja, kubatana kwangu kwekumhanya kwakawedzerwa 10, kunyangwe pazviitiko zvese izvi ndakaona iyo 3G chiratidzo mubato renzvimbo.
Wati wakwanisa kugadzirisa matambudziko ekufukidza e iPhone yako? Icho chinoramba chichiisa Hapana Sevhisi pachiratidziri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » IPhone isina sevhisi? Edza izvi mhinduro
Mercedes cinelli akadaro
Yangu iPhone haindibvumidze kuti ndipinde uye zvinoita sekunge haina sevhisi, yakandipa mukana wekupinda id yangu uye password uye yakaratidza kuti yakanga isiri iko kukanganisa. SOS
Pindura Mercedes Cinelli
Jimmy Iovine: "KuApple Music tinoedza kugadzira chiitiko chetsika dzese"
Maitiro ekubhadhara pazviteshi zvegesi ne iPhone yako